စာတိုပေးပို့မှု အစီအစဉ် | Telenor Myanmar
တယ်လီနောရဲ့ messaging pack အသစ်!
တယ်လီနောအသုံးပြုသူများအတွက် ၁၉၉ ကျပ်တည်းဖြင့် Viber နှင့် SMS အစောင် ၅ဝဝ အသုံးပြုနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
တယ်လီနောအသုံးပြုသူများအတွက် ၂၄နာရီ အတွင်း Viber ၁၈၈ မီဂါဘိုက် (မက်ဆေ့ချ်+ စတစ်ကာ) နှင့် (တယ်လီနောအချင်းချင်းပေးပို့ရန်) SMS အစောင် ၅ဝဝပေးပို့နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကို MyTelenor App, USSDတို့မှ တစ်ဆင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၉၉ ကျပ် ၂၄ နာရီ Viber အသုံးပြုရန် ၁၈၈ မီဂါဘိုက် ဒေတာ (မက်ဆေ့ချ် + စတစ်ကာ) အသုံးပြုရန်သာ
SMS အစောင် ၅၀၀ (တယ်လီနောအချင်းချင်းပေးပို့ရန်) APP (သို့) USSD (သို့) WOW BOX
Daily Messaging Pack!
Viber အသုံးပြုရန် ၁၈၈ မီဂါဘိုက် ဒေတာ (မက်ဆေ့ချ် + စတစ်ကာ) အသုံးပြုရန်သာ
SMS အစောင် ၅၀၀ (တယ်လီနောအချင်းချင်းပေးပို့ရန်)
ဝယ်ယူနေသော Daily Messaging Pack
စာတိုပေးပို့မှုအစီအစဉ် (Messaging Pack) ဆိုတာဘာလဲ။
စျေးနှုန်း : ၁၉၉ ကျပ်
ခံစားခွင့်များ : Viber အသုံးပြုရန် ၁၈၈ မီဂါဘိုက် ဒေတာ (မက်ဆေ့ချ်+ စတစ်ကာ) အသုံးပြုရန်သာ
SMS အစောင် ၅၀၀(တယ်လီနောအချင်းချင်းပေးပို့ရန်)
သက်တမ်းကာလ : ၂၄ နာရီ
အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းများ: App (သို့) USSD
အလွယ်တကူအစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မယ့် နည်းကဘယ်လိုမျိုးလဲ။
*979*2*3*6*1# ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်နှင့် Viber မှတဆင့် အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
Viber မှတဆင့် အင်တာနက်လိုင်း အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာ အကျုံးမဝင်ပါ။ Viber မှတဆင့် အင်တာနက်လိုင်း အသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အတွက် သုံးစွဲသူ၏ မူလလက်ကျန်ငွေ စာရင်း (Main Balance) မှ သုံးစွဲသူရွေးချယ် ရယူထားသည့် နှုန်းထားအစီအစဉ်အတိုင်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ပမာဏများမှာ ပေါင်းစည်းသွားပါမည်။
အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုမှုအတွက် ကန့်သတ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ဗီဒီယိုဖုန်း ခေါ်ဆိုမှု၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ Viber မှတဆင့် အင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အခြားသော ဗီဒီယိုနှင့် လင့်ခ်များကို သွားရောက်အသုံးပြုမှု စသည် တို့မှာ သုံးစွဲသူ သုံးစွဲသူရွေးချယ်ရယူထားသည့် နှုန်းထား အစီအစဉ်အတိုင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်ဒေတာလက်ကျန်ပမာဏ (ဥပမာ - ဒေတာစုဘူး)မှ အသုံးပြုကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။